देखेर पनि नदेखेको जस्तै नगर्नु होला ! ङलिङ खानी स्थित गुम्नाम गुप्तेश्वर महादेव गुफा : सक्दाे सेयर गराै - Gorkhali Post
मुख्य पृष्ठ /रोचक/देखेर पनि नदेखेको जस्तै नगर्नु होला ! ङलिङ खानी स्थित गुम्नाम गुप्तेश्वर महादेव गुफा : सक्दाे सेयर गराै
संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिका ४ लिङलिङ खानी स्थित रहेको गुप्तेश्वर महादेव गुफा गुम्नाम बनेको छ । आदीमकालमा डोलटार भन्ने ठाउँमा गाई चरन रहेको र चरनका क्रममा गाई हराए पछी खोज्ने क्रममा गुफा भित्रबाट गाईको आवाज आएको र गुफा पत्ता लागेको किम्बदन्ती छ । विभिन्न आकृतिका शिलाबाट निर्माण भएको प्राकृतिक गुफामा महादेवको पुजा गरिन्छ ।
यहाँ माघे संक्रान्ति र हरिबोधनी एकादशीका दिन धार्मिक मेला लाग्ने गरेको छ । अन्य समयमा पनि यहाँ रुद्री लगाउने गरिन्छ । धार्मिक अस्तित्वको यो गुफा प्रचार अभावमा ओझेलमा परेको हो । यो गुफामा मनोकांक्षा पुरा हुने विश्वास गरिन्छ ।
यो गुफामा पुजा गर्नाले सन्तान प्राप्ति तथा दिर्घायु र स्वास्थ्य लाभ हुने स्थानीय सिता श्रेष्ठले बताइन् ।
गुफामा पुजा गर्न छिमेकी जिल्ला भोजपुर, धनकुटा र तेह्रथुमबाट पनि भक्तजनहरु आउने गरेका छन् । तर भक्तजनहरु आउने र बास बस्न नजिकै बस्ती नभएकाले समस्या हुने गरेको छ । गुफा भित्र स्थानीय बुद्धी श्रेष्ठ र सीता श्रेष्ठका दम्पतिले ५० हजार खर्च गरेर विजुली बत्तीको व्यवस्था गरिदिएका छन् ।
साबिक वाना गाविसले गुफासम्म पुग्न सडकको ट्रयाक ओपन, रेलिङ र सिढी निर्माण गरेको थियो । तर भिरको बाटो भएकाले अहिले नगरपालिकाको ३ लाख रुपैंयाको बजेटले थप रेलिङ तथा सिढी निर्माणको काम भइरहेको छ भने सडकको स्तरोन्नतीको काम भएको वडाअध्यक्ष काजी बहादुर तामाङले बताए ।
सदरमुकामबाट नजिकै रहेको यो गुफा जति चर्चा हुनु पर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । गुफाको थप प्रचार गर्न गुफासम्म पुग्ने सडकलाई स्तरोन्नती गरी बाह्रै महिना सडक सञ्चालन गर्नु पर्ने छ । भने गुफाको महत्व र धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सके यसको अस्तित्व चुलिने निश्चित छ ।
नारीका यी स्वभावले बिग्रन्छ घर परिवार ! विवाहितहरुले अवश्य पढ्नुहोला
बिबाहित महिलाले काँचको चुरा र सिन्दुर लगाउनु पर्ने वैज्ञानिक कारण यस्तो ! तपाइले पनि जान्न जरुरी छ ।
दाहसंस्कार भइरहेको बेला जनकपुरमा भयो यस्तो डरलाग्दो घटना [मलामीको भागाभाग]